Fandrobana senatera : Nantsoin’ny zandary i Hery Be -
AccueilRaharaham-pirenenaFandrobana senatera : Nantsoin’ny zandary i Hery Be
22/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nahazo fiantsoana avy amin’ny “brigade spéciale” etsy amin’ny Toby Ratsimandrava i Hery Rasoamaromaka na Hery Be, noho ny fitoriana napetraky ny senatera Olivier Rakotovazaha. Isan’ireo mpitarika ny hetsika tetsy amin’ny lapan’ny tanàna ny tenany kanefa tsy olom-boafidy solombavambahoaka. Fandrobana tsotra izao ny finday teny an-tanan’ny senatera tao amin’ny biraon’ny Antenimieram-pirenena etsy Ampefiloha no fiampangana azy, fihetsika mamohehitra mitory ny tsy fahazakana demôkrasia, ary taratry ny maha mpanongam-panjakana azy rahateo koa.
Nitety minisitera ireto solombavambahoaka MAPAR ireto tamin’io fotoana io, ka nihazo ny minisiteran’ny Serasera tsy lavitry ny CNAPS izay misy biraon’ny Antenimieram-pirenena ihany koa. Nivoaka ny senatera Olivier Rakotovazaha ary naka sary sy horonan-tsary tamin’ny alalan’ny findainy, ny fihetsika sy ny fitenenana navoakan-dry Hery Rasoamaromaka. Tamin’izay fotoana izay indrindra anefa no norobain’i Hery Be teny an-tanan’ity senatera ityilay finday, ary nivoaka nanerana ny facebook sy ny tambazotra rehetra izany tranga fandrobana izany.
Nametraka fitoriana manoloana izany fandrobana nahazo azy izany ny senatera Olivier Rakotovazaha, ka izao nampanantsoin’ny “brigade spéciale” hamaly ny fiampangana azy izao i Hery Rasoamaromaka. Fomba amam-panaon’ny TGV tamin’ny taona 2009 tokoa moa ity mandroba fananan’olona ity ka lasa toetra raiki-tapisaka amin’ireo mpanara-dia an’i Andry Rajoelina. Marihina eto indray fa olon-tsotra i Hery Rasoamaromaka no tonga teny an-toerana nandroba ny senatera Olivier Rakotovazaha sy namoaka mpiasa ary nanidy tamin’ny rojo vy ny ministeran’ny Serasera sy ny biraon’ny Antanimieram-pirenena. Mbola tany misy fanjakana ary tan-dalàna kosa ny firenena ka tsy azon’izao olona rehetra izao hanaovana izay tiany e!
Mponina Antananarivo niisa 3400 no namaly ny antson’ny mpitantana ny kaominina Antananarivo-Renivohitra tamin’ny fampidirana tao anatin’ny ara-dalàna ireo olona efa nanao trano nefa tsy naka alalana tany amin’ny kaomina. Raha ny fanentanana nataon’ny tompon’andraikitry ny ...Tohiny